Akụkụ a na-amasị m ịsị na a raara nye naturalism, bụ ụdị blog, akwụkwọ edetu na ihe niile m na-amụ banyere isiokwu dị iche iche na data niile m na-achịkọta. Ọ bụghị blog, ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ mgbe niile, a gaghị egosi ihe kachasị ọhụrụ. Ọ dị ka nke wiki ebe m na-akọwakarị ma melite ozi, ịnwe ya mgbe niile
N'etiti ebe dị iche iche m na-amalite ịhapụ ozi m na-egosipụta:
Akwụkwọ osisi na ozi metụtara ya
Mpempe akwụkwọ nke anụmanụ, nnụnụ, ụmụ ahụhụ, amphibians, anụ na-akpụ akpụ, na ndị ọzọ
Anyị ga-amalite na Geology, meteorology, ornithology, wdg.
Loda ndị mmadụ
Ọ bụ midwife toadAlytes ndị na-amụ nwa). Amphibian a na-ahụkarị na Spain nwere obere ihe.
Onye a nwere obere akụkọ. Anyị chọtara ya, mgbe nhicha ọdọ mmiri ahụ. Mgbe oge oyi niile na-enweghị jupụta ya, ọ na-apụta na ọkpọkọ ndochi ahụ wee daba n'ime mmiri ahụ. Na mgbakwunye na tadpole 6 nke otu nha. Anyị hapụrụ frog ma lekọta tadpole, 3 n'ime ha ruru ndị okenye.
Eji m njide a kụziere ụmụ m ndị nwanyị ihe mata umu ihe nwere igodo, ntuziaka dichotomous maka njirimara nke amphibians na ogige okike nke Spain. O bu ndi Ministri kere ya maka mgbanwe nke ebe obibi. I nwere ike ibudata ya na njikọ a ọzọkwa m kpọgidere ya ma ọ bụrụ na ọ fuo na ihe ndị a wee kwụsị ịdị. Ha hụrụ m n'anya.
Onye isi ndị aghaCentaurium erythraea) bụ kwa afọ ma ọ bụ biannual ogwu, ahụkarị nke dị n'ógbè Meditereniannke na-eto na ala ogbenye na ala akọrọ, na-esote okporo ụzọ na na-ekpochapụ n'etiti oke ọhịa, n'ọtụtụ oge na-akpụ obere ahịhịa ahịhịa nke centaury.
Ọ bụ ahụkarị osisi nke ahịhịa nke obodo Valencian ebe m bi. Ahụrụ m ya kwa afọ ma ụmụ m nwanyị amatala nke ọma. Nke a bụ vidiyo nwa m nwanyị 7 na-ewebata ya.
Etu esi amata ihe dị iche na swifts, ilo na ụgbọ elu
Swifts, ilo na ụgbọ elu Ha bụ 3 nnụnụ a na-ahụkarị n'obodo anyị na obodo anyị n'agbanyeghị na ha na ha bi, ndị mmadụ na-emegharị ha anya ma ha enweghị ike ịmata ha.
Anyị ga-ahapụ akwụkwọ ntuziaka zuru ezu na aghụghọ na akụkụ niile nke anyị ga-achọ ezigbo nnabata.
LSwifts dị mfe nghọtaN'etiti ụgbọ elu na ilo anyị ga-eleba anya na ntakịrị mana ị ga-ahụ otu esi dị mfe.
Slowlow na ụgbọ elu bụ Hurindinidae nke ezinụlọ Hirundinidae mgbe swifts bụ ezinụlọ aphid Apodidae nke pụtara n'ụzọ nkịtị na-enweghị ụkwụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu gbasara onye ọ bụla, anyị nwere faịlụ nke ọ bụla. Oge ọ bụla nwere data ndị ọzọ, foto na ịmata ihe
El Carolina Reaper ma ọ bụ Carolina Reaper bụ ose kacha ekpo ọkụ n'ụwa niile na 2013 nwere uru nke 2 Scoville Units, ọ bụ ezie na ụdị ya dị iche n'etiti 220 na 000 dabere ọnụ ọgụgụ scoville. Ezigbo iwe ga-eme ka ọ bụrụ ihe a na-agaghị eri eri. Ugbu a, e nwere ndị ọzọ spicier iche dị ka ose X.
Ọ bụ ọtụtụ Capsicum chinense kpọmkwem HP22BNH nke Ed Currie nwetara site na ụlọ ọrụ ahụ PuckerButt ose Company. Ọ bụ obe n’etiti onye Habanero chili na Naga Bhut Jolokia (nke m na-achọ ịzụta n'afọ a n'ụlọ akwụkwọ ọta akara)
Maka ndị na-amaghị, anyị na-akpọ Sea Glass, Seaglass, Glass Beach, ma ọ bụ mmiri mmiri na-ada na ibe nke ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Foto si na https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sanchezn
Otu n'ime nnụnụ ndị mepere emepe nke anyị na-ahụkarị tinyere nza n'agbanyeghị na anyị enweghị ike ịchọpụta ya. Plagbọelu ahụ bụ onye bi n’okporo ámá anyị. Anyị na-ahụ ka ha na-efegharị na ha na akwụ akwụ na mbara ihu na nkuku.
Ha zụlitere n'ọchịchị na ugbo, obodo nta na obodo nta yana ala emeghe ọ bụ ezie na ọ masịrị ụlọ.
Uche Scoville ka Willbur Scoville chepụtara iji tụọ etu ose na-ekpo ọkụ si dị. Na-enyocha ọnụọgụ capsaicin, nke bụ ihe dị na osisi nke genus Mgbapu. O mere ya site na nnwale Organoleptic ebe ọ gbalịrị ịhazi na ịchọta ụzọ iji zụta ngwaahịa dị iche iche. Ọbụna n'agbanyeghị erughị eru dị ka ọ bụ nyocha nchịkwa nke ahịhịa na-emetụta mmadụ ma na-enwe mmetụta dị ukwuu, ọ bụ ọganihu.
Taa (ebe ọ bụ na 1980) a na-eji usoro nyocha ọnụọgụ dị ka High Performance Liquid Chromatography (HPCL) nke na-atụle oke Capsaicin. Usoro ndị a na-eweghachi ụkpụrụ na "nkeji oke ma ọ bụ ikpo ọkụ", ya bụ, n'otu akụkụ nke capsaicin kwa nde ntụ ntụ akpọrọ. Ọnụ ọgụgụ nke otu a na-amụba site x15 iji tọghata ngalaba Scoville. Ọ gaghị adị mkpa ịga Scoville mana a ka na-eme ya n'ihi enweghị mmasị na onye nchọpụta ya n'ihi na ọ bụ usoro amarala ama.
Varietiesdị dị iche iche dị iche iche nwere ike ịnwe ọtụtụ ma ọ bụ obere Capsaicin, mana ọbụlagodi usoro ịkọ ihe na / ma ọ bụ ihe gburugburu ebe obibi nwere ike ikpebi na chili na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-erughị ala ọbụlagodi na ọ bụ nke otu ahụ.
Ọ bụ ọtụtụ Capsicum chinense.
N’etiti habaneros enwekwara ọtụtụ ụdị dị iche iche
Osisi na germination
Mkpụrụ nke ose na ose nwere ike iwe ogologo oge ịmalite, ọkachasị ma ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ adịghị ezu, mana ọ bụrụ na anyị etinye ya karịa ogo 30 anyị ga-eme ka ha too n'etiti ụbọchị 7 na 14, mkpụrụ ndị ahụ toro na ndị cotyledons na-apụta .
Foto nke Vincent van Zalinge
A na m ewere ilo dịka otu n'ime nnụnụ kachasị mma enwere. Ọbịbịa ya na nke ụgbọ elu na swifts ha na-anọchite anya mbata nke oge opupu ihe ubi.
Ọ bụ Umu anumanu tinyere n'ime Ndeputa ohia di iche iche n'okpuru ochichi nchebe puru iche.
17 - 21 cm na ndị na-eto eto site na 14 ruo 15
Ndị na-agba ịnyịnya na Africa
Hunts ụmụ ahụhụ dị ala karịa ala
Anyị nwere ike ịhụ ya site na Eprel ruo Ọktọba.